Vikings. Nguva dzose yakasarudzika uye inogara iri mufashoni. Kumwe kuverenga | Zvazvino Zvinyorwa
Vikings. Nguva dzose yakasarudzika uye inogara iri mufashoni. Kumwe kuverenga
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Bvunzo, Fantasy, Mabhuku, Novela, Romance novel
Kuvhara kumashure: (c) TVNorge. Kubva muterevhizheni yake den sisi viking (Yekupedzisira Viking). Mutambi weNorway, director uye mushamarari Trond Espen Seim.
Vikings. Maguta mashoma ane mukurumbira, akazara nengano uye ngano. Classics muNhoroondo yeHumanity iyo isingabude muchitaera. Kana mumabhuku. Ini ndinokumikidza ichi chinyorwa kwauri nekuti ini ndiri kupemberera nhasi iyo Gumiguru inowira kune imwe: chisikwa icho chinoshongedza kumashure kwekavha uye icho chinoratidza kuti vanamwari vana veOdin vachiri kuramba vachifamba Pasi kukomborerwa kwevanhu vanofa isu kungokambaira pamusoro pake. Ikoko vanoenda 7 yakasarudzwa kuverenga kubva pamhando dzakasiyana.
2 MaViking - James L. Nelson
3 Northumbria, Humambo Hwekupedzisira - Bernard Cornwell
3.0.1 Series mazita kusvika zvino:
4 Ipfupi nhoroondo yeVikings - Manuel Velasco
6 Saga yeGreenlanders & Saga yeEirik iyo Tsvuku - Asingazivikanwe Icelandic yezana ramakore rechiXNUMX
7 Vanodya Zvitunha - Michael Crichton
Tinotanga ne romance novel. Kana paine panogona kuve neyakafanira, yakasarudzika uye yakatamba mitambo mumhando iyi, ndeyekuti iyo Viking inoshandisa seayo pane iyo butiro zvakare kushandisa.
Munyori weAmerica Bobbi smith sanganisa nhoroondo uye kudanana mune iyi nyaya yemhare Brage norwald. Haana kumbokundwa hondo, kusvikira akundwa nemaSaxon nekuda kwekunyengera kwepedyo. Nekudaro, uye kunyangwe uri akuvara uye zviitwe musungwa, anosangana ne shamwari isingatarisirwi. Mukadzi dynna ndiye chikomba chaiyewo stereotypical villain Saxon muchinda Edmund. Dynna anomuvenga uye muBrage anoona mukana we tiza. Uye saka vanoita. Mubvunzo ndewokuti kana vachigona kupukunyuka kune avo vanovatevera kana kukwezva uye kushuvira zvavasingakwanise kubatsira asi kunzwa.
Zvinonakidza, asi zvakatiomera mune dzimwe nzvimbo. Kune zvekare kumwe kukundikana kwakakomba senge, semuenzaniso, kusimba kunopihwa hunhu hwemurume akaipa uyezve kumutumira pasina kumwe kunonoka. Kunyange zvakadaro, inogona kuverengerwa zvirinani nekutarisa kwekutarisa nezve akawanda cliches emhando.
Tinoenda ku nhoroondo yenhau nemunyori akakosha werudzi, iyo American James L. Nelson. Iyi ndiyo zita rekutanga yesaga yakatsaurirwa kwavari.
Tiri mugore 852 AD C. MaViking ave achisvetukira mugungwa kwemakore, achikunda uye kupamba nzvimbo. Ivo pakupedzisira vasvika iyo mhiri kweEngland neIreland. Uye kunyangwe pakutanga aya mafambiro aive echipamba ichocho, vakapedzisira vagara ipapo, kunyangwe vachipikisa kuramba, sezvavari muIreland.
Thorgrim iyo Night Wolf uye Ornolf iyo Tireless vanosangana nechikepe cheIrish kutakura chinhu chakakosha: korona. Vanoibata muhondo ine chisimba asi vanofuratira kukosha kwayo kuvanhu veIreland uye nesimba rainopa kuna mambo anaro. Saka ivo vanozobatanidzwa muchirongwa che kunyengera uye chisimba mu medieval Ireland, uko madzimambo emuno anorwisana uye vapambi kubva kuchamhembe kuzotora masimba.
Northumbria, hushe hwekupedzisira - Bernard Cornwell
Mumwe wevatenzi vakuru venhoroondo yepasirese nhoroondo haigone kusiya protagonists senge maViking kuti vatsaurire saga, iyo Saxons, Vikings uye Normans, inosanganisira Mabhuku e7.
Munyori wechiChirungu anoisa nhepfenyuro iyi mukupinda kweViking kweGreat Britain panguva yekutonga kwe Alfred Mukuru. Uye zvinotanga mugore 866 when Uthred, wechidiki Anglo-Saxon wedzinza revamiriri, anogara pakati penyika mbiri. Iwo maViking vakamubira semwana uye izvo zvinomubatsira kuti azive uye agone kutonga tsika, zvitendero uye tsika dzeSaxon neDanes. Zvishoma nezvishoma anowana ruremekedzo rwekushinga kwake uye hushingi, asi panouya nguva umo hunhu hwako hunobvunzwa.
Pane yazvino british tv akateedzana, kubva pamwaka miviri, nezve saga inonzi Mambo wekupedzisira.
Series mazita kusvika zvino:
Northumbria, hushe hwekupedzisira,
Svein, iro rine bhiza jena,
Nyika iri pamoto
Ipfupi nhoroondo yeVikings - Manuel Velasco
Este chinyorwa chenhoroondo inotarisa zvakanyanya pa mavambo uye chitarisiko cheVikings muEurope pakati peXNUMXth uye XNUMXth century. Nekudaro isu tinoona nekudzidza nezve yakapfuma tsika yeViking, isu tinoona kukosha kwavo sevarwi, vafambisi vengarava uye vavaki vengarava, uye tinoonawo avo zvekutengesa, izvo zvakavatungamira kuti vagadzire nzira kubva Greenland kuConstantinople, uye kunyange kusvika Baghdad.
Iyo hupenyu hwezuva nezuva hwevashandi, varimi nevatengesi uye, chokwadi, rinotaura nezve rake ngano uye maitiro echitendero. Inosanganisira yekupedzisira yekuwedzera ine runyorwa rwemazita eViking, Reyes yenzvimbo dzakasiyana dzeNordic, ma profiles e vatambi vanoda kuziva, nzvimbo dzekufarira, kana ruzivo rwezvazvino repikicha yemadrakkars, pamwe ne chronology yakatsanangurwa viking era.
Imwe huru yenyaya yenhoroondo, asi kuda nyika panguva ino, inotinyudza mune imwe nhambo iyo inokodzera kuwana nekuverenga. Assur mukomana wechiGalician anogara kuOuteiro, taundi diki rinotamburawo viking kupamba izvo zvinotyisidzira rakabudirira Compostela kana gore richipfuura 968 AD C.
Inherera uye nehama dzake dzakabatwa nevapambi, Assur achaita a chiitiko chikuru kuziva kwaari. Kune izvi iwe uchave nerubatsiro rwe Gutier de Leon, infanzón weCount Gonzalo Sánchez, uyo anomugamuchira pasi pekudzidzisa kwake, na Jesse ben benjamin, chiremba wechiJudha ane mutsa, uye na weland, Norman murwi anoshandira maKristu. Asi zvese zvinozooma kana naiyewo kubatwa ndokuendeswa kunzvimbo dzinotonhora dzekuchamhembe.
Saga yeGreenlanders & Saga yeEirik iyo Tsvuku - Asingazivikanwe Icelandic yezana ramakore rechiXNUMX
Antón naPedro Casariego Córdoba sevashanduri tiunzirei aya ma saga maviri anorondedzera kuti avo protagonists, maIceland ekuNorway mavambo, vanowana nekuita Greenland, vanosvika munyika dzeAmerica uye vanoedza kugara ipapo kutenderedza gore ra1000. tinopfuurira zvishoma muGalicia nekuti yaive nguva imwechete apo maViking enzvimbo imwe chete paakarwisa Santiago de Compostela uye akaita incursions kurwisa Umayyad caliphate uye Asturias.
Zvitunha Zvinodya - Michael Crichton
Uye ini ndinopedzisa neruzivo rwekuti, kune vakareruka, vane Kugadziriswa kwemafirimu yehumwe hukama ne Murwi nhamba 13.
Muzana remakore rechigumi caliph weBaghdad inotumira mumiriri kuna Mambo wevaBulgaria, asi iyo nhume inobiwa nemaViking. Mumiriri anozopera zvishoma nezvishoma kudzidza uye kunakidzwa netsika vatorwa vevatapi vavo. Uye padivi pavo nasabhuku wavo Buliwyf Endai pane chiitiko chinonakidza: kurwisana zvisikwa zvisingazivikanwe, «lavo vanodya vakafa".
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » marudzi » Novela » Vikings. Nguva dzose yakasarudzika uye inogara iri mufashoni. Kumwe kuverenga
"Northumbria, Humambo Hwekupedzisira" ndiro bhuku rakandizivisa kune nyika yeVikings. Ini ndinoda saga uye pachangu ndiyo yangu huru "Viking" kurudziro lol.
Chinyorwa chakanaka, ini ndinosaina kunyanya nyika dzandakanga ndisingazive.
Autumn Fair yeGwaro rekare uye rekare reMadrid. Kufamba-famba pakati pezvishongo.
Novela Negra, chiyero chakawandisa chemagirizi.